फर्काइए पल शाह, के दिए बयान ? – Karnalikhabar
फर्काइए पल शाह, के दिए बयान ?
नाबालिग गायिकालाई बला’त्कार गरेको अभियोगमा पक्रा’उ परेका अभिनेता पल शाहलाई फेरि तनहुँको दमौली ल्याइएको छ।
जिल्ला प्रहरीले कार्यालय गैंडाकोटमा उनको बयान लिएपछि मंगलबार दमौली पठाइएको डिएसपी दिलीप गिरीले जानकारी दिए।
पीडित गायिकाका आफन्तले सुरूमा दमौली र पछि नवलपुरमा पनि शाहविरू’द्ध जाहे’री दिएका थिए।
फागुन १५ मा तनहुँ प्रह’रीसमक्ष आत्मसम’र्पण गरेका शाहलाई केही दिनअघि गैंडाकोट पुर्‍याइएको थियो।
तनुहँ प्रहरीले शाहलाई चैत ४ गते सम्म हिरासतमा राखेर अनु’सन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुँबाट अनुमति लिएको छ।
राजेश हमालको ’गाउँले ठिटो’
नेपाली चलचित्रका नायक राजेश हमालको एकल स्वरमा रहेको गीत ’गाउँले ठिटो’ रिलिज भएको छ ।शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच नायक हमालको एकल स्वरमा रहेको गीत ’गाउँले ठिटो’को गीत र भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
गीतको भिडियोमा नायक हमालको अभिनय पनि रहेको छ । गोबिन्द भट्टको शब्द रचना तथा सन्तोस श्रेष्ठको संगीत रहेको यस गीतमा अभिनेता हमाल गाउँले भेषभुषामा देखिएका छन् ।
रोजगारीको लागि विदेशिएको युवा आफ्नै गाउँ फर्केर कृषि कर्म गरी सफल बनेर उदाहरणिय व्यक्ति बनेको कथा उक्त भिडियोमा रहेको छ । भिडियोमा हमालको साथमा उत्तम केसी, गोबिन्द भट्ट, एस।के। दाहाल लगायतको अभिनय रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै महानायक हमालले आफु गायक नभई नायक नै भएको भएको र गायन केवल प्रयास मात्रै रहेको बताए । हमालले आफुले अभिनय गरिरहेका अन्य म्यूजिक भिडियो जस्तो यो गीत नभएको बताउँदै तीन महिनाको मेहनत पछि यो गीत तयार भएको बताए ।
नायक हमालले भने, ’कुनै नराम्रो शहरमा पनि केहि न केहि सुन्दर पक्ष हुन्छ । तर, काठमाडौंमा केहि पनि छैन । परिवारसँग समय बिताउने स्तरीय स्थान समेत छैन । यसतर्फ कसैको ध्यान छैन । केहि न केहि त हुनुपर्छ शहरमा भनेर मैले व्यंग्य गरेको हुँ’।
कार्यक्रममा हमालकी पत्नी मधु भट्टराईको पनि उपस्थिती थियो । भट्टराईले हमालको गायन क्षमता यति धेरै राम्रो छ भनेर आफुलाई पहिले थाहा नभएको बताइन् । गीत हेर्दा रमाईलो लागेको बताउँदै उनले यो गीत गाउन आफुले प्रेरित गरेको सुनाईन् ।
अघिल्लो - अभिनेता शाहरुख खानकी छोरी सुहाना पढ्छिन संसारकै महंगो कलेजमा, फिस सुन्दानै जान्छ सातो
कांग्रेस सहभागी नभए वाम गठबन्धन हुन सक्छ : मन्त्री खतिवडा - पछिल्लो